Tikidhada qashin-saaridda - iSearch
Start naftaada qalab kayd kaashawiito
1 Waa maxay dabeecad aan loo xirxirayn, waa maxay baayacmushtarka?
2 Maxaad ku samaysaa qoob-ka-shaqeeye / dhar-xidhid la'aan?
3 Maxaad u eegi kartaa marka aad iibsanayso qalabka wax lagu xirto ee la xidho?
4 Bixinta ama alaabta calaamadeysan?
5 Farsamooyinka farsamada iyo bateriga
6 Maxaa muxuu yahay mishiinka?
7 Sidee buu u shaqeeyaa qalabka wax lagu xirxiro / matoorka?
8 Maxay yihiin sharraxaadaha iyo maxay tilmaamayaan?
8.1 Baqshadaha nikel-cadmium (gaaban: NiCd)
8.2 Baadhitaanada Nololka Birta ee Nickel Metal (NiMH)
8.3 Batariyada Lithium-ion (Li-Ion)
9 Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada
Waa maxay dabeecad aan loo xirxirayn, waa maxay baayacmushtarka?
Inta badan, ereyga kayd kaashawiito guud ahaan noocyada kala duwan, laakiin qalabka shakhsiyadeed ayaa si kala duwan u kala duwan guryaha: inta lagu jiro kayd kaashawiito ugu horreyntii in lagu xoqo oo la xoqdo guntinta iyo nuts, shaqada ugu weyn ee daloolin - sida magaca hore u bixiyaa - daloolka dharka. ah daloolin mar labaad ayaa la isku daraa hawlaha labada qalab; wuu xirxiri karaa daloolin - Si kastaba ha noqotee, waa in kaliya la saaro qodobka fudud. Sida magacyada hore u bixiyaan, qalabyada ayaa ka madaxbannaan korontada a accumulator oo sidaas darteed waxay gacan ka geysaneysaa waqti aad u ballaaran iyo keyd ah tamar. Intii aad muraayada u rogi lahayd mashiinka, mashiinku wuxuu caawiyaa. Bal qiyaas in aad haysato alaabta gurigaaga mid kaashawiito gacanta. Mudo intee le'eg ayey qaadanaysaa, iyo inta ay le'eg tahay xooggaaga?
Maxaad ku samaysaa qoob-ka-shaqeeye / dhar-xidhid la'aan?
Maadaama ay aaladahaasi yihiin kuwo aad u badan, waxaa si joogta ah loo isticmaalaa: iyagoo leh afar derbi oo ay ku jiraan laakiin sidoo kale farshaxan. a kayd kaashawiito waxay kaa caawineysaa sidii aad ugu dadaali laheyd inaad iskugu soo ururiso oo aad u kala qaaddo qalabka gurigaaga. Hadduu ku jiro musqusha, jikada, qolka jiifka ama beerta - waxaa loo isticmaalaa meel kasta. Maadaama ay yihiin kuwo aad iyo aad u yaryar, waxay si fiican ugu habboon yihiin dhibcaha gaaritaanka. Shaqada dheeraadka ah ayaa sidoo kale lagu samayn karaa si sahal ah iyadoo la isticmaalayo batroolka mashiinka moobiilka marka loo eego qaybta cirbadaha gacanta ee culus. Nidaamka bateriga ayaa kaashan kara birta, qoryaha iyo dhismaha derbiga. Sidaa daraadeed, waxay waliba ku jiraan waxyaabo aan lagama maarmaan ah oo ka mid ah qoys kasta handyman.
Maxaad u eegi kartaa marka aad iibsanayso qalabka wax lagu xirto ee la xidho?
Waxaa jira dad badan oo kala duwan qashin-qubaha iyo mashiinnada. nin wuxuu halkan ku jiraa rasmiga doorashada. Haddii ay tahay magaca caanka ama qiimaha dhimista? Qeybaha kala duwan ee loo yaqaan 'taqsiir la'aanta' waxaa lagu gartaa asalka dhabta ah in ay yihiin kuwo aad u iftiimaya. Markaa hubi inaadan ka maqnaan labadan arrimood ee muhiimka ah, kaliya waxaad ka careysiineysaa marka dambe haddii qalabkiina aad u culus yahay oo weyn. Laakiin waxa ku saabsan tafaasiil farsamo waa in mid ka mid ah dareenka bixiyaa? Halkan waa muuqaal guud, caddayn dheeraad ah Go'aanka iibsiga waxay bixisaa:
Bixinta ama alaabta calaamadeysan?
Dabcan, screwdrivers kayd meel kasta waa maalmahan si wanaagsan oo raqiis iibsan, laakiin xaqiiqada ah waa in xitaa haddii unit ku eegaysaa discounter ah at jaleecada hore, waayo, baayactan ah, waxaa sidoo kale laga yaabaa in ay joojiyo shaqada waqti gaaban ka dib markii - ka siin hal dayactir in this inay ku riyoon kiiska. Oo haddii aad tahay nasiib iyo qayb firaaqada waxaad ku bixin kartaa maalgelinta alaabta calaamadeysan. Sidaa daraadeed, waxay macno u leedahay in ay bilowdo lacag yar oo tayo fiican leh. Qalabka calaamadaysan waxaa loogu talagalay daa'in, haday wax dhacdo, qaybaha qaybta gashiga ayaa si fudud loo iibsan karaa.
Farsamooyinka farsamada iyo bateriga
Haddii aad go'aansatay in soo saaraha, dhibaatada xigta imika way timaadaa: Waa noocee noocee ahee fadlan? Halkan waa inaad fiirisaa lambarka korontada baytariyada la soco. Lambarka korontada ayaa saameynaya miisaanka, sababtoo ah tirada sare ee tirada, qalabka culus. Haddii aad raadineyso qalabka wax lagu dhejiyo ee guriga, laba iyo toban qalab waa ku filan. Ugu yaraan 18 Volt waa in loo isticmaalo si joogto ah. Macluumaadka farsamooyinka kale ee muhiimka ah, oo ay tahay inaad u fiirsato, waa tirada bateriga. Tani waxay kuu sheegaysaa sida ugu dhakhsaha badan qalabku uga baxayo. Qiimaha ku wareegsan 2 Amperestunden ayaa lagula talinayaa halkan. Waxay noqon laheyd mid macquul ah in la iibsado batteriyaal labaad, markaa maahan inaad joojiso shaqadaada sababtoo ah kayd kaashawiito ama mato. Sidaas waxaad lumin kartaa waqti aad u yar.
Maxaa muxuu yahay mishiinka?
Marka ay dhacdo qoob-ka-shaqeyn la'aan, tareenka lagu bixiyo Newtonmeter waa hantida ugu muhiimsan. Tani waxay muhiim u tahay isdifaacidda. Tirada sare ee tareenka, xooga badan ee batterigu leeyahay. Hadaad rabto inaad iibsato qalab si aad u hesho, si kastaba ha noqotee, xawaaruhu aad ayuu uga muhiimsan yahay Xuddunta, Haddii aad rabto in aad hesho gawaarida xakameyn la'aanta, taas oo ah, cutub isku dhafan, oo isku daraya dabeecadaha qalabka, waxa ugu muhiimsan waa in qalabku leeyahay awoodda ugu badan ee suurtogalka ah - awood ayaa loo baahan yahay halkan! Si kastaba ha noqotee, waa inaad ogaataa in haddii aad marar badan qaadato, waxaa habboon in la helo mashiinno gooni ah oo wadajir ah, taasina waxay noqoneysaa awood ka badan tan moodooyinka tamarta korontada leeyihiin.
Sidee buu u shaqeeyaa qalabka wax lagu xirxiro / matoorka?
Qalabeeyaha si uu u diyaar garoobo qalliinka, qashin yar ayaa la geliyaa Chuck demisay. Si kastaba ha noqotee, noocyada kala duwan ee batariga ah, si kastaba ha ahaatee, darawalada wiishka badanaa ma laha foorno faleebo ah, laakiin kaliya mashiinka meeldhexaadiga ah ee loogu talagalay iskuxirida kabaha. Taasi waa sababta ay u miisaan yar yihiin. Marka bedelka la riixo, mawduuca boosku wuxuu ogaanayaa booska furaha iyo wuxuu ku wareejin karaa tamar ka dhigan batroolka ilaa korontada korantada. ah motor koronto hadda madaxa madax-furfurayaasha aan xadhigga lahayn iyo sidaas daraadeed qashin-qubka ayaa dhaqaaqaya - aynu tagno!
Makita DF331DSMJ Cordless Drill 10,8 V / 4,0Ah, Turquoise / Tilmaame Madow
Iyada oo leh iftiin leh LED
Qalab xoog leh oo loogu talagalay xawaaraha sare ee shaqada iyo tareenka sare
Tilmaamaha kartida bateriga
Kormeerka heerkulka isdhexgalka
Haddii aad qabto a kayd kaashawiito waxaad sidoo kale u baahan tahay qashin khafiif ah. Xidhmooyinka waxay la mid yihiin kuwa isku xidhan, laakiin waxay ka kooban yihiin hal madaxa oo aan loo isticmaali karin gacanta. Sidaa darteed waa qeyb muhiim ah oo ka mid ah qalabka. Xaydhuhu waxay leeyihiin qaabab kala duwan oo loogu talagalay madaxyada kala duwan, halkaan waxaa ku yaal xargaha, iskutallaabta, torrx iyo allen profile.
Maaddaama qoob-ka-shaqeeyaha aan xadhiga lahayn isku darin laba qalab mid, wuxuu leeyahay lahjad jajab. Qalab gaabis ah oo loogu talagalay qashin-qubka iyo qalabka degdegga ah ee qoditaanka. Madaxa wuxuu noqon karaa mid furfuran, xakameyn, laakiin maro la dhejiyo qiyaaso kala duwan ayaa lagu xiri karaa foori-saaridda. Darawaliintu waa inay leeyihiin awood ugu yaraan toban jibbaar qalabka 15 si loo helo sida ugu dhow ee suurtogalka ah ee awoodda tababarka caadiga ah.
Maxay yihiin sharraxaadaha iyo maxay tilmaamayaan?
version The mobile waa kala duwanaayeen in in ay ku noolaan karaa muddo dheer oo aan koronto. Sidaa awgeed, batterigu waa qaybta qashin-qubaha. The soo socda ayaa ah saddex nooc oo ugu ballaaran loo adeegsaday bateriga loo isticmaalo qalab soo bandhigay, bateriga Nikkel-cadmium (gaabiyo NiCd), hydride biraha nickel (NIMH) iyo batariyada lithium-ra'iyi (Li-Ion).
Baqshadaha nikel-cadmium (gaaban: NiCd)
Beteriyada dib u rogi kara ayaa wali lagu isticmaalaa qalab qadiyadeed, inkastoo sharci ahaan lagu mamnuucay Jarmalka tan iyo 2009. Sababta: waxay ka kooban yihiin cadmium, bir adag oo culus, taas oo kaliya loo kala saari karo si gooni ah iyo gooni gooni ah. Faa'iidadooda, si kastaba ha ahaatee, waxay yihiin kuwo aad u xoogan marka loo eego dulmiga iyo dheecaanka qoto dheer, waxayna leeyihiin nolol waqti dheer oo ay la socoto wareegyada 1.500. Xitaa heerkulka hooseeya iyo heerkulka hooseeya, baytariyadu wali waxay shaqeeyaan dhibaato la'aan. Si kastaba ha ahaatee, NiCd waxay leedahay kali kali awood u yeelashada biilasha NiMH iyo farqiga u dhaxeeya awoodda Lithium-ra'iyi waa xitaa walaac badan.
Baadhitaanada Nololka Birta ee Nickel Metal (NiMH)
nickel-biraha baytariyada hydride laga helay alaabooyin badan oo elektaroonik ah, tusaale ahaan in cadayga korontada, kamaradaha digital ka weyn, laakiin sidoo kale in qalabka. Inkasta oo ay ka jaban tahay ka batariyada lithium-ra'iyi kulul raadinaya yihiin, ay si xun ugu kici badh, laakiin waxa ay ku xanuunsado kartaa saamayn batari tiiro ah, ie haddii ay marna si buuxda u saaray, waxqabadka qalabka korontada aad ka sii dartay. this xasuusta saamayn waa la tirtiri karaa iyada oo lagu soo dallaco oo ka saaro batteriga shan jeer iyada oo la isticmaalayo fiilo gaar ah.
Batariyada Lithium-ion (Li-Ion)
Tani waa tiknoolajiyada batroolka ugu fiican oo laga helo suuqa. Waxay ka yar yihiin kuwii horay u ahaa, sababtoo ah tiknoolijiyada ayaa leh awood dheellitiran oo unug. Sidaa darteed, batariyadu way yar yahiin oo u fududeeyeen - inkastoo ay xitaa xitaa, haddii aanay awoodin, marka loo eego batariyada kale. Qalabkan awgood, batteriyadu mar walba waa la isticmaalaa marka awoodda ugu badan ee suurtagal ah ay tahay meel yar oo suurtagal ah accumulator hits. Taasi waa sababta ay sidaa waxtar u leh qalabka mobile waa: baytariyada The miisaantaan ku dhowaad waxba handymen isticmaali kartaa qalabka ay la isticmaalo ugu yaraan suurto galka ah ee ciidanka. Faa'iidooyinka kale waa in aanay jirin saamayn xasuusta dhacdaa iyaga oo ku, taas oo yaraynaysa awooda batariga, waxaa jira oo kaliya aad u yar yahay isku-dheecaan marka aan la isticmaalin muddo dheer iyo macdanaha culus ku jira unugyada, taas oo faa'iido u ah deegaanka.
Qalabka batariga waxaa lagu gartaa awooddooda: waxay yihiin kuwo yaryar, iftiin iyo isafgarad. Waxaa si fiican loogu isticmaali karaa meelaha ay adag tahay in la gaaro waxaana sidoo kale loo isticmaali karaa shaqo dheer, daal aan lahayn. Sidaas darteed waxaa badanaa loo adeegsadaa shaqa raadinta iyo shaqo kore. Waxaa kale oo weheliya in aanay jirin fiilooyin horjoogsanaya, taas oo shaqada ka dhigeysa mid sii adag. Waxay xitaa loo isticmaali karaa dibadda beerta beerta iyadoo ay ugu wacan tahay dhaqdhaqaaqooda. Qalabjebin la'aantu waxay u oggolaaneysaa shaqooyin badan oo rogrogmi kara iyo tayada sare ee batteriyadu ay tahay, waxay sii dheeran karaan sidoo kale isticmaalkooda dabeecadahooda. Maalmahan batariyada dib-u-cusbooneysiinta ayaa si dhaqso ah dib loogu soo celin karaa - badiyaa beteriyada dib-u-cusbooneysiin leh ayaa sidoo kale si toos ah u heli kara laba batariyaal oo dib-u-cusbooneysiin ah - tani waxay ka dhigaysaa farshaxanka xitaa dabacsan. Halkaas, qeybta batteriga badanaa waa ka raqiisan tahay nooca fiilada.
Dhibaato weyn oo ka mid ah dabeecadaha aan xadhkaha lahayn, si kastaba ha ahaatee, waxay leeyihiin awood ay ka yar yihiin kuwa dhiggooda leh awoodda korantada. Sidaas darteed haddii aad leedahay shaqo culus ama aad u baahan tahay in aad isticmaasho qalabkaaga inta badan, waxaa si fiican loogu adeegsan doonaa qalab leh hawlgal socket.
Faa'iidooyinka iyo caqabadaha horeyba u dhigaa naqshad: Dhamaan reerka, waa in la helaa qashin aan sal lahayn. Waxay aad u faa'iido badan yihiin waqtiyo badan oo aysan ku qaali karin iibsashada. Haddii aad doorato kaashawiito ah, aamusnaan qaadan lacag waxoogaa ka badan in gacanta iyo lacag bixisid si aad faahfaahinta farsamada fiiro: Iyada oo batari iyo tayada brand wanaagsan hubaal waxaad yeelan doontaa raaxo badan ee caaryada. Iyo guuritaanka soo socda ayaa imaan kara ...
Qalabka fiilo-xargaha ee Bosch xadhigga IXO (jiilka 5, oo ku jira sanduuqa kaydinta) Muujinta
Qalabka fiilo-xargaha ee xadhkaha goos gooska ah ee 'IXO' - waa aaladda awoodda guuleysta ee 5. Qarni
Naqshad hagaagsan: Hawlgal isku-dhafan oo kala-beddelasho ah oo si habboon loo maareeyo
Qalabka gawaarida si toos ah loogu talagalay adoo adkeynaya ama xakamaynta nalka
Iyadoo la isticmaalayo fiilo USB ah oo loogu talagalay lacag si degdeg ah iyo calaamadda xaaladda LED-ka
Baaxadda gaarsiinta: IXO, 10 qalliinno, Micro USB charger, sanduuqa kaydinta
VTOTOX Cordless Screwdriver / Cordless Drill, Max 20V / 2Ah, 2x2000mAh Lithium Baturi Rechargeable Battery, Torque 42N.m, 60Min Charger, 3 / 8 Inch Drill Chuck, Variable Variable, Waaberiga Dhiig, Mitir, Mallaal
1.A Guul-Dhameystiran: 1 * charger, 2 * 2000mAh lithium-ion batteriga, Qalabka 1 *, 9 * jeex jeexjeexa (5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm), 3 * HSS birnsills HSS5, HSS6, HSS8), 3 * Brad Point Drill (5,6,8), 6 * Screwdriver (PH2, CR-VPZ1, CR-VT25, PZ2, 5, 6), 1 * Hex Adapter, 1 * , Charger Degdeg ah: 1V-100V, oo qiyaastii ah 240 saac oo buuxa.
2.Akkuschrauber: Waxaa lagu shaqeyn karaa gelinta tooska ah ee baytariga, taas oo ku habboon in la isticmaalo. Batteriga wuxuu gaarayaa ilaa 20V, oo ku qalabeysan baytariyada firaaqada ah ee 2, nalalka seddex tilmaame, xusuusin saaxiibtinimo. Khafiifa, qabashada jilicsan waxay bixisaa raaxo dheeri ah inta lagu gudajiro.
3. Sifooyinka Awoodda leh: Xawaare Sare iyo Mid Yar (1Gang: 0-400 RPM / 2 Gear: 0-1600 RPM), Dejinta Torque: 18 + 1. Waxay xakameyn kartaa habka shaqeynaya saacad / saacad dhanka dhanka midigta ah, taas oo ku habboon in meesha laga saaro ama la beddelo ka dib markii furitaanka la xiray. Meesha khariidada dhexe ee baddashadu waxay noqon kartaa mid amaan ah markaad joojiso.
Faahfaahinta 4.interface3 / 8 inji (10 mm), torque 42N.m, Loogu talagalay qoditaanka derbiyada, alwaaxa iyo birta, mashiinnada qodista raadiyaha waxaa lagu heli karaa xaalado torque adag oo deggan. Naqshadeynta nalalka LED-ka waxay xallineysaa dhibaatada aan faa iido laheyn ee meelaha mugdiga ah iyo meelaha qarsoon.
5.RS-US Direct waa iibiyaha kaliya ee idman ee alaabada V VONTOX ee saxda ah ee Amazon. Waxyaabaha laga helo bixiyeyaasha kale waa been abuur ama dib u fasaxid aan la fasaxin. Si aad u hubiso inaad heshay alaabada rasmiga ah iyo adeegga macaamiisha aadka u fiican, fadlan xaqiiji iibiyaha diiwaangashan.
Makita HP333DSAX1 fiilo la’aan combi luul 12 V max. / 2,0 Ah, Baytariyada 2 + Xaraashka Qaadashada Qaadashada Calaamadaha
Xawaaraha elektronik ahaan lagu hagaajin karo
Mowqifka waa la joojin karaa
Iyada oo muujineysa awoodda bateriga
18-isku-hagaajinta tiknoolajiga iyo talaabada qashinka
Madoow + Decker BDCDC18BAFC-QW qalabka wax kululeeya (18V, 2X Li-ion batteriga, qalabka meeraha, iftiinka shaqada ee korantada, 1A xarkaha, inc. 80 TLG.Achieories kiis tayo sare leh), 18 V bandhigay
Awood leh oo waara: waad ku mahadsan tahay matoorka adag iyo alaabada meeraha iyo sidoo kale batteriga Li-Ion ee muddada fog
Aagga loo adeegsan karo: Awoodda saxda ah iyo xawaaraha qoditaanka alwaaxa iyo birta iyo sidoo kale dhammaan codsiyada xoqidda
Qaabka Ergonomic: Dammaanad qaadida shaqada daal la'aanta, waxay si raaxo leh gacanta ugu jirtaa, qabatana jilicsan iyo dusha sare
Isticmaalaha-saaxiibtinimada: Iftiinka shaqada ee korantada wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku shaqeyso aragtida liidata
Baaxadda gaarsiinta: 1x mashiinka wixiis xadhkaha gooyaa, 2x Li-Ion batteriga slidepack, 1x laba jibaar, 1x xeedho, 80 pcs. Qalabka lagu rakibay, kiiska 1x
V VONTOX mashiinka wax lagu xiro / qalabka birta-xargaha ah ee Max 12V, 2x2000mAh baytariyada lithium, torque 25N.m, 60min charger, 3/8 inch drill chuck, xawaaraha variable, darbiyada qoditaanka, alwaaxa, birta birta ah
Qalabka Qalabka Dhameystiran: 1 * charger, 2 * 2000mAh batari lithium-ion, 1 * kiiska qalabka, 9 * garabka garabka (5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm), 3 * HSS bir bir bir bir waxoogaa (HSS5, HSS6, HSS8), 3 * Brad Point drill (5,6,8), 6 * dabeysha （PH2, CR-VPZ1, CR-VT25, PZ2, 5, 6), 1 * adax-ga adax, 1 * hayaha fidinta, 1 * Xarig dabacsan. Xaraashka degdegga ah: 100V-240V, qiyaastii 1 saac buu buuxaa.
Qalabka daboolka aan xudunta lahayn: Waxaa lagu shaqeyn karaa iyadoo toos loo geliyo batteriga, oo ay fududahay in la isticmaalo. Batteriga wuxuu gaarayaa 12V, oo ku qalabeysan 2 batteriga firaaqada ah, seddex nalalka tusaya, xusuusta saaxiibtinimo. Laydh, jilicsan ayaa bixiya raaxo dheeri ah inta lagu gudajiro
Hawlaha awoodda leh: xawaare sare iyo mid hooseeya (1 gear: 0-450 r / min / 2 gear: 0-1400 r / min), dejin culus: 18 + 1. Waxay xakameyn kartaa habka shaqada saacadaha / saacadaha dhanka saacadaha lagu socdo, taas oo ay fududahay in meesha laga saaro ama la beddelo ka dib markii miskaha la xiro.
Qeexitaanka guud ee 3/8 inji (10 mm), torque 25N.m, alwaax: 25 mm, bir: 8 mm, derbiyada qoditaanka, alwaaxa iyo birta, mashiinnada qodista raadiyaha ayaa la heli karaa iyagoo leh xaalado adag oo adag. Naqshadeynta nalalka LED-ka waxay xallinayaan dhibaatada noqoshada aan caadiga ahayn ee meelaha mugdiga ah iyo meelaha qarsoon.
RS-US Direct waa iibiyaha keliya idman ee alaabada VONTOX ee saxda ah ee Amazon. Waxyaabaha laga helo bixiyeyaasha kale waa been-abuur ama dib-u-fasaxid aan la fasaxin. Si loo hubiyo inaad heshay waxyaabo asal ah iyo adeegga macaamiisha aad u fiican, fadlan xaqiiji iibiyaha diiwaangashan.
Makita DF333DSAE xadhkaha dillaaca bilaa xadhig 12 V max. / 2,0 Ah, 2 baytariyaal + xeedho markii lagu qaadayo kiis, 10.8 V bandhigay
2-xawaaraha biraha buuxa marsho Planetary
20-isku-hagaajinta tiknoolajiga iyo talaabada qashinka
Qalabka wiishka ee Kawasaki, mid yar, oo leh kiis iyo qaniinyo, 1500 mAh, dabacsanaan toos ah, iftiinka LED, xajin jilicsan, shaashada gacanta lagu xirto
Caawiyaha ku habboon ee reerka - wuxuu ku habboon yahay isu-ururinta alaabta guriga, biraha lagu dhejiyo alwaax, caag ama bir dhuuban
Dhinacyada yar yar awgood, waxaad sidoo kale gaari kartaa meelaha si adag loo gaaro oo waxaad ka shaqeyn kartaa geesaha - tani waa sababta qalabka wax lagu xirto uu sidoo kale caan ugu yahay haweenka
Si cad ayaa loo habeeyay - qalabka oo dhan si cad ayaa loo habeeyay kiiska - markaa had iyo jeer waxaad helaysaa gacanta saxda ah
3 volts, 6 dib u rogid daqiiqad kasta, waqtiga lagu amro 210 saac, torque 5 Nm, oo leh biriiga korantada, orodka / bidix,
Iyada oo loo adeegsado qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka garaafka - miiqan yar-yar ayaa ah kaaliye lagu kalsoonaan karo
Dhaqdhaqaaqa xajmiga xantiisa 2 x 18V 3Ah, kiis aluminium ah oo ay ku jiraan 96-pcs. Tilmaamaha xirmooyinka DHP453RFX2
Battery Bl1830, 18V 3Ah (2X)
Kiis Aluminium Incl. 96-pc. Kit siyaada
Qalabka daboolka aan fiiqin ee 18V, HYCHIKA 35N · m xadhkaha fiiqan ee leh batteriga 1500mAh, 21 + 1 dejiyaha xawaaraha iyo xawaaraha isbeddelaya, 1H oo degdeg ah, qalabka 22PCS, oo ay kujiraan kiis qoditaanka iyo shaashadda muuqaalka
SE 21 + 1 TORQUE SETTINGS AND PARGING PARGER】 Dhagaxyada xadhkaha goos goosku wuxuu leeyahay heerar wareega 21 torque iyo hal tilaabo bir ah. Waxaa loo isticmaali karaa alwaax, alwaax, balaastiig iyo muraayad wax duubaya. Torque ugu sareysa waa 35 Nm oo loogu talagalay xoqista. Waxaa lagu qalabeeyay batari lithium ah oo loo yaqaan '18V 1500mAh' iyo shey Schnllladegerät. Wakhtiga buuxa ee batariga waa saacadda 1.
SP LUUQADA FARSAMADA EE LAGU DIYAARIYO MADAXWEYNAHA ballaaran screw Qalabka fiiqdheelaha ee bilaa xadhigga wuxuu ka kooban yahay xawaaraha qalabka xawaaraha ee 2: 0-400RPM iyo 0-1500RPM, taasoo ka dhigeysa mid kufiican barnaamijyo ballaaran oo qoditaan iyo xoqid.
IYADOO 22 PCS ACCESSORIES AND COLLAR BAG accessories Qalabka 22 waxaa loogu talagalay inay kaafiso baahiyaha noocyada ugu badan ee qoditaanka iyo shaashadda. Ku Fiican Ku habboon godadka qodista ee qoryaha iyo bacda; Giiji oo fur daboolka. Qulqulka dabaqyada leh ee loo yaqaan '10mm, 12mm, 14mm iyo 16mm' waxay si aad ah ugu habboon yihiin caajisinta alwaax. Ku darista 6pcs qalloocinta qaloocinta, 6pcs fiilooyin xirmooyin ah, saldhigyo 5pcs, adapter iyo boorso qalab.
DIIWAANKA GUUD】 Qalabka furitaanka waxaa ku qalabeysan nal LED ah oo kuu oggolaanaya inaad ku dhexjirto jawi mugdi ah. Markay noqoto furaha qufulka waxaa suurta gal ah in aaladda laga ilaaliyo isticmaalka. Xarkaha aan kala-goyska lahayn waxaa sabab u ah naqshaddiisa ergonomic, oo aad ugu raaxeysan gacanta. Way fududahay in lagu xidho suunka suunka adag. Markaad ku gudajireyso si fudud waad uumiga kartaa aaladda.
MAXAAD KA HELAAN】 1 x 18V HYCHIKA Cordless Screwdrivers, 22 x Qalabka, 1x 18V 1500mAh Lithium Ion Battery, 1 x Charger Degdeg ah, 1 x Xarig Xirmooyin, 1 x Qalabka Bag, 1 x Kaadhka Xambaarka, 1 x
Qalabka fiilo-la'aanta ah ee aan xudunta lahayn ee 12V, HYCHIKA xadhkaha dillaaca 30N · m Max. Torque oo leh batteriga 1500mAh, 1H si dhakhso ah u dallac, 4PCS drillillillilling, 6PCS twill drill, 6PCS Sccket bit, 5PCS socket, oo wata tilmaame jeebka
SE 21 + 1 TORQUE SETTINGS AND PARGING PARGER】 Dhagaxyada xadhkaha goos goosku wuxuu leeyahay heerar wareega 21 torque iyo hal tilaabo bir ah. Waxaa loo isticmaali karaa alwaax, alwaax, balaastiig iyo muraayad wax duubaya. Torque ugu sareysa waa 30 Nm oo loogu talagalay xoqista. Waxaa lagu qalabeeyay batari lithium ah oo loo yaqaan '12V 1500mAh' iyo shey Schnllladegerät. Wakhtiga buuxa ee batariga waa saacadda 1.
MAXAAD KA HELAAN】 1 x 12V HYCHIKA Cordless Screwdrivers, 22 x Qalabka, 1x 12V 1500mAh Lithium Ion Battery, 1 x Charger Degdeg ah, 1 x Xarig Xirmooyin, 1 x Qalabka Bag, 1 x Kaadhka Xambaarka, 1 x
Maqaalka horeKids Caddies